မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများ - Cazoo
ပင်မစာမျက်နှာ » ပင်မစာမျက်နှာ » မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများ
tag ကို: 51% တိုက်ခိုက်မှု, မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများ, လုပ်ငန်းခွင်၏အထောက်အထား
မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများသည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံတွင်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် အဘယ်သူ၏ပြည်နယ်က၎င်း၏ဖန်တီးမှုပြီးနောက်ပြောင်းလဲမရနိုင်အရာဝတ္ထု.
Immutability သည် Bitcoin နှင့် blockchain နည်းပညာတို့၏အဓိကလက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများကြောင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ကွန်ယက်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောအချက်အလက်များကို (ဥပမာ - အစိုးရတစ်ခုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခု) အားကိုင်တွယ်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်အတုပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အားလုံးသမိုင်းအရောင်းအကတည်းက မည်သည့်အချိန်တွင်မစစ်ဆေးနိုင်ပါ, မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများမြင့်မားသောဒီဂရီခွင့်ပြုပါတယ် ဒေတာသမာဓိရှိ.
အများပြည်သူဆိုင်ရာ blockchains များ၏မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများသည်လက်ရှိယုံကြည်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုတိုးတက်စေပြီးသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာသို့မဟုတ်ထိရောက်စွာမလိုအပ်သောကြောင့်စစ်ဆေးခြင်း၏အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများသည် Bitcoin နှင့် blockchain နည်းပညာတို့၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများအနက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း blockchains တွင်သိမ်းဆည်းထားသောဒေတာများသည်အားနည်းချက်များကိုလုံးဝခံနိုင်ရည်မရှိပါ - အကယ်၍ တိုက်ခိုက်သူတစ် ဦး သည် network hash rate အများစုကိုစုဆောင်းနိုင်ပါက - သရက်, ခေါ်သောတိုက်ခိုက်မှုအတွက်မဟုတ်ရင်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဒေတာကိုပြောင်းလဲနိုင်ဘူး 51% တိုက်ခိုက်မှု.
ဤသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် hashrate ၏ ၅၁% ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူသည်အရောင်းအ ၀ ယ်သစ်များအားအတည်ပြုချက်များမရရှိနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုလုံးဝပြောင်းပြန်လွှဲပစ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် Bitcoin မှဖြစ်ပျက်နိုင်သလား? ဟုတ်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော hashing power၊ အလွန်ဈေးကြီးသော hardware နှင့်သိသိသာသာလျှပ်စစ်ပမာဏလိုအပ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကွန်ယက်များ လုပ်ငန်းခွင်၏အထောက်အထား hash နှုန်းနိမ့်ကျခြင်းဖြင့်၎င်းတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောတိုက်ခိုက်မှုကိုခံရနိုင်သည်။ ကွန်ယက်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်လိုအပ်သော hashing power စုဆောင်းခြင်းသည်မဆင်ခြင်နိုင်သည့်လုပ်ရပ်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Blockchain ၏သမိုင်း